DAAWO VIDEO:Nabad sugida Dowlada oo howlgalo ka sameeyay koontoroolada Muqdisho
November 30th, 2014 | Posted in Wararka | Read More »
R/wasaare Cabdiwali : “ Xilligaan shacabka Soomaaliyeed ma xamili karaan colaado macno daro ah”
Muqdisho, 30, Novembar, 2014….Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya mudane Cabdiwali Sheikh Axmed ayaa ugu baaqay dhinacyada ku dagaalamaya deegaano hoostaga degmada Xarardheere in ay deg deg u joojiyaan colaada, isuguna yimaadaan miiska wada hadalka. Ra”iisul Wasaaraha ayaa sheegay in dagaaladaan aysan ahayn kuwo loo cudur daari karo marka la eego khasaaraha nafeed ee ka dhashay […]
Maamulka Gobolka Banaadir oo bilaabay Cilad Bixinta nalalka cadceeda ku shaqeeya+SAWIRO
Sida ay sheegtay idaacada dowlada Maamulka Gobolka Banaadir ayaa maanta bilaabay hawlo lagu cilad bixinayo nalalka cad ceedda ku shaqeeya ee ku yaalla waddada Maka Al-Mukarama, kuwaasi oo qaarkood aan shaqeynin. Cabdullaahi Maxamed Cabdulle Saneey oo ka mid ah mas’uuliyiinta Maamulka Gobolka Benaadir ayaa warbixin kooban siiyay xubno ka socday Maamulka Gobolka oo maanta howlo […]
(BARMUUDO.COM):-Waxaa isa soo taraya calaamadaha muujinaya in Ra’iisulwasaare C/weli Sheekh Axmed uu xilkiisa weyn doono kadib wada hadalo hoose oo maalmihii u danbeeyay socday. Warar hoose oo aan helnay ayaa sheegaya in asbuucaan gudihiisa uu Ra’iisulwasaaraha xilkiisa weyn doono , labo wado ayuuna midkood ku weyn doonaa in xildhibaanada ay codka kalsoonida kala laabtaan ama […]
Askari Dowlada ka tirsan oo qofna dilay qof kalana dhaawacay
(BARMUUDO.COM):-Mid ka mid ah askarta Dowlada Soomalaiya oo cabsan ayaa maanta Xaafada taleex ee degmada Hodan wuxuu ku toogtay labo nin oo midi dhintay halka midka kalana dhaawac xun uu gaarsiiyay. Askarigaan oo cabsanaa sida dadka deegaanku sheegeen ayaa rasaas la beegsaday labada nin, dadka deegaanka ayaa isku dayay inay qaadaan kan dhaawaca ah laakiin […]
Hay’ada TIS/IOM oo Mashaariic Horumarineed ka fulisay Degmooyinka Gobolka Banaadir+SAWIRO
Hay’ada TIS/IOM ayaa mashaariic horumarineed waxaa ay ka fulisay Degmooyinka Gobolka Banaadir kuwaasoo laga xusi karo leyrarka ku shaqeeya cadceeda oo ay ka hirgaliyeen qeybo ka mid ah wadooyinka degmooyinkaasi. Mashaariicda Hay’adaani fulisay waxaa ugu danbeeyay kuwo ay ka fuliyeen Degmada Boondheere sida wadada isku xirta Madaxtooyada ilaa maana Boolyo iyo sidoo kale leyrar ku […]
(BARMUUDO.COM):-Waxaa Maanta Magaalada Muqdisho deeq lacageed loogu qeybiyay ilaa sedex Wariye oo siyaabo kala duwan dhawaan loogu dhaawacay Gudaha Magaalada Muqdisho. Wariyayaashaan labo ka mid ah waxaa la doonayay in la qaarajiyo inkastoo ay dhaawacmeen waxaana ay kala yihiin Wariye C/risaaq Black oo u shaqeeya TV-ga Somali Channel kaasoo lagu dhaawacay dhaawacay meel u dhow […]
Mogadishu, 29 November 2014 – Wasiirka Warfaafinta Mudane Mustafa Sheikh Ali Dhuxulow ayaa ka warbixiyey horumarka Dowladda ee usbuucii la soo dhaafay. Wasiirka ayaa ka hadlay arrimo ay ka mid yihiin; Xoojinta Doorka Dumarka, Dib u habeynta Gaadiidka ka howlgala Dekedda, Qaadista jid-gooyooyinka sharci darada ah, Horumarka Dhalinyarada Soomaaliyeed, dayactirka waddooyinka Muqdisho iyo Shabeelaha Dhexe, […]
Wasiirka arimaha dibada Soomaaliya oo Dalka Talyaaniga kula shirey dhigiisa Germany
(BARMUUDO.COM):-Wasiirka arimaha dibada Soomaaliya C/raxmaan Ducaale Beyle ayaa Magaalada Rome ee Xarunta Talyaaniga wuxuu kula shirey dhigiisa dalka Germany Steinmeier. Wasiirka Beyle ayaa u jooga Rome ka qeybgaalka shir looga hadlayo dadka soo galootiga ku ah qaaradda Yurub. Bayle iyo Steinmeier waxay isla soo qaadeen xiririka labada dal iyo guud ahaan xaalada dalalka geeska Afrika […]
Libaax Rabaayad ah oo xalay baxsaday dadna ku dhaawacay Magaalada Muqdisho
(BARMUUDO.COM):-Degmada Yaaqshiid gaar ahaan xaafada Jungal waxaa xalay baxsaday Libaax rabaayad ahaa kaasoo daqiiqado gudahood dib ugu soo laabtay halkii uu ku xirnaaa . Haweeney Soomaaliyeed ayaa la sheegay inay xaafada jungal ku xanaaneyso ilaa sedex libaax iyadoo labo ka mid ah ay hore u geeriyoodeen halka midka sedaxaadna uu xalay baxsaday inkastoo uu soo […]